Mmetọ ala: ihe kpatara ya na nsonazụ ya | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Tomas Bigordà | | Agriculturelọ ọrụ ubi, Ọmụmụ ihe ọmụmụ
La ala mmetọ ma ọ bụ ngbanwe nke ịdị mma nke ala ahụ bụ n'ihi ihe dị iche iche na nsonaazụ ya na-ebutekarị nsogbu siri ike nke metụtara ahịhịa, anụmanụ ma ọ bụ ahụike mmadụ ogologo oge.
Site na ọrụ ugbo ọ bụ otu n'ime ụzọ nke usoro okike na-adịghị mma, na-emetọ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ ma ọ bụ mmiri mmiri, nke pụtara na enweghi ike idozi nsogbu a mgbe ụfọdụ na mgbe ụfọdụ naanị akụkụ nke mmebi enwere ike iweghachi. Ma,kedu ihe na-akpata itufu ala na kedu ka esi edozi ya?
1 Ihe na-ebute nsogbu nke ala
1.1 Ihe mkpofu ahihia na Spain
1.2 Ercros na-efesa na Flix
1.3 Ogologo ndepụta
2 Ofdị ihe mkpofu
2.1 Ihe mkpofu
3 Ihe si na nsị nke ala
3.1 Chernobyl afọ 30 mgbe e mesịrị
4 Ngwọta maka mmetọ ala
4.1 Nwee ezigbo netwọọdụ ọhaneze
4.2 Iji ụgbọ ala eletrik eme ihe
4.3 Zere ime ka ụgbọ ala gị na-agba ọsọ ogologo oge mgbe ị na-akwụsị
4.4 Mee ka ugbo ala gi di nma
4.5 Nyere aka igbochi igbukpọ osisi
4.6 Choputa ihe ndi ozo.
4.7 Akpa rọba
4.8 Izizi ahihia
Ihe kpatara nsogbu nke ala dị iche iche, otu ihe atụ bụ ihe na-egbu egbu n’okpuru ala nke na-emecha mebie mmiri dị n’ime ala nke a ga - eji wee mee mmiri, drinkụọ ma ọ bụ kwụsị nsị anyị site na usoro nri. Usoro nke na-ejigide onwe anyị na ihe niile gbara anyị gburugburu, na nsogbu kachasị bụ na ọ ga-ewe ọtụtụ ọgbọ iji dozie ihe anyị kpatara na mbọ a iji mepụta ọtụtụ n'echeghị banyere ndị ga-abịa n'ọdịnihu. anyị.
Kpọtụrụ ebe a rụrụ arụ anaghị adịkarị ntụzi aka. Ọ bụ ihe na-eme mgbe e liri ha ihe na-egbu egbu n'okpuru ala ma ndị a na - emerụ mmiri mmiri mmiri mmiri nke a na - eji mmiri mmiri, ị drinkụ ma ọ bụ kwụsị nsị anyị site na Ngwongwo nri, site n'iri azu, ulo ozuzu ma obu anumanu ozo.
Nchekwa ihe na-ezighi ezi nke mkpofu, ebumnuche ya ma ọ bụ ihe ọghọm (dị ka ụlọ ọrụ Ercros na Flix), nchịkọta ahihia di n’elu ya ma ọ bụ olili nke otu (ọtụtụ ebe mkpofu ahịhịa na Spain), yana nkwụsị mmiri na tankị ma ọ bụ nkwụnye ego n'ihi mmebi, akụrụngwa na-adịghị mma bụ ụfọdụ n'ime isi ihe kpatara ya.
Ma, anyị anaghị anọ ebe a kemgbe edere ndepụta a site na nsogbu “pere mpe” dịka nkwupute redioaktivu, kpụ ọkụ n'ọnụ iji ọgwụ ahụhụ, nsị, ụlọ ọrụ kemịkalụ ma ọ bụ otu ihe owuwu ihe eji eme ihe taa n'amaghị mmetụta ha nwere.
Ihe mkpofu ahihia na Spain
Obere nlebara anya nke Spain na-akwụ maka imegharị na ilekọta gburugburu ebe obibi taa bụ ihe ihere n'ihu European Union, mana ọ na-eyi egwu ịghọ isi iyi nke nde nde na afọ ndị sochirinụ. Brussels nwere nnukwu ọchịchọ imegharị ihe maka atụmatụ: na 2020, mba niile so na ya ga-egweri 50% nke ihe mkpofu ha, na Commission na-akwado ịnabata 70% na 2030. Agbanyeghị, Spain enweghị ike ịmegharị taa 33% nke mkpofu gị na ịga n'ihu dị ntakịrị. Ọbụna ndị kachasị nwee nchekwube na-atụ anya na mba anyị ga-arụ ọrụ ya n'ime afọ atọ.
Nkwalite edemede mbụ abiala n'ụdị ikpe ikpe abụọ nke oflọikpe nke Ikpe Ziri Ezi nke European Union (CJEU), nke katọrọ Spain maka ịdị adị na ịhapụ ya kpamkpam Ogwe ahihia iri-ato 88 a na-achịkwaghị achịkwa. E nyere nke mbụ na February 2016 wee chọpụta ebe mkpofu 27 nke ka na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-enweghị akara mgbe emechichara. Nke abụọ abiala ụbọchị ole na ole gara aga wee tinye mkpịsị aka ya na ebe mkpofu 61 ọzọ, 80% kesara n'etiti Canary Islands na Castilla y León.
Dị ka ndị ọkachamara dị iche iche si kwuo, ebe a na-ekpofu ala bụ bọmbụ na-egbu oge. Ozugbo emechie ha, ha ga-achịkwa gburugburu ebe obibi ke isua 30, nyochaa mmiri dị n'ime ala na ihe ọkụkụ nke ikuku, n'ihi na anaghị akwụsị usoro ire ere site na ịdechi oghere ahụ.
Ọtụtụ ihe mkpuchi iwu kpuchiri ya site na polyethylene nke nwere millimita atọ, nke nwere ihe mgbochi ụrọ n'ọnọdụ kachasị mma, mana gas na mmegharị na-agbakarị ha arụ. «Ha bụ nsogbu ahụike ọha na eze. Ndị ọchịchị na-ezochi n'eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ nwere naanị ihe mkpofu na-adịghị arụ ọrụ, ma kpachara anya maka mkpofu ndị ahụ na ihe owuwu, dị ka asbestos ma ọ bụ ọkpọkọ ọkpọ, nke egosiri ha na-egbu egbu»
Ercros na-efesa na Flix
Osimiri Flix, n'ógbè Tarragona nke Catalan, ahụwo ihe karịrị otu narị afọ nke nhichapụ na mmetọ ala na-adịgide adịgide, ihe ndị na-akpata bioaccumulative na kemịkal na-egbu egbu site na ụlọ ọrụ kemịkal nke ụlọ ọrụ Ercros. Nke a emeela ka mmetọ n'ozuzu osimiri Ebro, site na ebe ahụ gaa n'ọnụ.
Ndị na-emetọ ihe gụnyere arọ ọla dị ka Mercury na cadmium, ma ọ bụ na-egbu egbu ma na-adịgide adịgide ogige organochlorine dị ka hexachlorobenzene, polychlorinated biphenyls (PCBs) ma ọ bụ DDT na metabolites ha.
“Ercros, nke e lere anya dị ka ebe ọgwụ kemịkal kachasị emetọ na osimiri Ebro, nọ na-alụ ọgụ ruo ọtụtụ afọ iji zere ịkwụ ụgwọ maka nhicha nke osimiri ahụ, nke bụkwa isi iyi dị mkpa nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ. Factorylọ ọrụ Ercros dị nso na obodo Flix, nke na-akpọ aha ya na mmiri nke mmetọ nke Ercros SA, bụbu Erkimia, ebe ọ na-arụpụta ma na-ere. ngwaahịa ndị bụ isi maka ụlọ ọrụ ọgwụ na ọgwụ.
N'ụzọ dị mwute, ndepụta ahụ dị ogologo, ọ fọrọ nke nta ka enweghi ngwụcha. Anyị nwere ike ịkọpụta ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị mkpa, dịka nsị (ihe ndị dị ka mercury, cadmium, ọla kọpa, arsenic, lead), ụlọ ọrụ kemịkal, ihe egwu rediotiik, iji ọgwụ arụ arụ, mmetọ sitere na ọkụ ọkụ, anwụrụ ọkụ si ụlọ ọrụ, ihe ụlọ, nsure ọkụ nke mmanụ ọkụ (coal, oil and gas)), ochie siwa na ọnọdụ ọjọọ ndị ọzọ.
Anyị pụrụ ịhụ na e nwere nnukwu ụzọ dịgasị iche iche nke mmetọ ala, ihe na-akpata ya ọtụtụ oge o siri ike ịchọta ha, ebe ọ bụ na mmetọ ahụ nwere ike iru osisi ma ọ bụ anụmanụ ma ọ bụ merụọ mmiri n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, mana ọ bụghị mgbe niile ha abaghị uru.
Na eziokwu siri ike bụ na e nwere ọtụtụ ihe na-akpata ya, nke n'ozuzu ya na-akpata obi erughị ala n'ịgbalị ịchọpụta ihe ha bụ, ebe ọ bụ ọrụ siri ike. Ọ dị ka a ga - asị na n'ụlọ anyị nwere ọnya mmiri 20 ma anyị enweghị ike ịhụ ebe ha nọ na otu esi ekpochapụ ma ọ bụ mezie ha. Nsogbu dị ebe a abụghị ụlọ anyị, ọ bụ ụwa nke anyị nọ n'ihe ize ndụ
Ọzọ nke nnukwu nsogbu bụ na e nwere ọtụtụ ihe na-akpata ya, nke n'ozuzu ya na-akpata obi erughị ala n'ịgbalị ịchọpụta ihe ha bụ, ebe ọ bụ ọrụ siri ike. Ọ dị ka a ga - asị na n'ụlọ anyị nwere ọnya mmiri 20 ma anyị enweghị ike ịhụ ebe ha nọ na otu esi ekpochapụ ma ọ bụ mezie ha. Nsogbu dị ebe a abụghị ụlọ anyị, ọ bụ ụwa nke anyị nọ n'ihe ize ndụ.
Ofdị ihe mkpofu
Ngwaahịa dị egwu: Ngwa nhicha, agba, ọgwụ na batrị na-egbu egbu. Ngwaahịa ndị a chọrọ mkpọsa nchịkọta a kapịrị ọnụ nke na-anaghị ejedebe ebe mkpofu a na-achịkwaghị achịkwa ebe ha nwere ike ibute ọdachi gburugburu ebe obibi site na mmetọ mmiri na ala.
Ikpo bụ otu n’ime ngwaahịa ndị kasị dị ize ndụ maka Mercury na cadmium ọdịnaya. Mgbe batrị ga-agwụ ma kpokọta na ebe mkpofu ma ọ bụ gbaa ọkụ, a na-ahapụ Mercury ka ọ gbapụ, n'oge na-adịghị anya ọ ga-abanye na mmiri. Plankton na algae na-etinye Mercury, site na ndị a ruo azụ na site na ndị a ruo mmadụ. Mkpọchi bọtịnụ nwere ike imetọ lita 600.000. mmiri. Ọgwụ nwere mmiri na-egbu egbu nke nwekwara ike ịbanye n'ime ebe mkpofu mmiri ma banye na mmiri, na-emetọ ya.
Ezinaụlọ: mkpofu si n'ụlọ na / ma ọ bụ obodo.
Lọ ọrụ: mmalite ya bụ ngwaahịa nke usoro nrụpụta ma ọ bụ mgbanwe nke akụrụngwa.
Ile ọbịa: ihe mkpofu nke a na-ahazi dị ka ihe egwu dị ize ndụ ma nwee ike ịbụ organic na inorganic.
Ahịa: site na ahia, ulo oru, ulo ahia, wdg, na ihe mejuputara ya bu ihe ndi ozo, dika nkpuru osisi, akwukwo nri, kaadiboodu, akwukwo, wdg.
Ihe mkpofu obodo: nke kwekọrọ na ọnụ ọgụgụ mmadụ, dịka mkpofu si n'ogige ntụrụndụ na ubi, arịa ụlọ ndị na-abaghị uru n'obodo, wdg.
Oghere oghere: Satellites na ihe ndị ọzọ sitere na mmadụ nke, mgbe ha nọ na ụwa, ha agwụla ndụ ha bara uru.
Ihe mkpofu plastik dị n'oké osimiri bụ nnukwu nsogbu gburugburu
Ihe si na nsị nke ala
La ala mmetọ na-anọchite anya usoro nsonaazụ na nsonaazụ na-emerụ ahụ maka mmadụ, yana maka flora na fauna n'ozuzu. Mmetụta dịgasị iche iche nke toxicological na-adabere na nke ọ bụla nke mebiri ahụike nke ala.
Nke mbụ n'ihi Mmetọ a na-emetụta ahịhịa, a na-emebi osisi ma na-ebelata ọtụtụ ụdị, ndị ka ga-adị ndụ ga-eweta akụkụ ndị na-adịghị ike na usoro okike ha ga-esi ike.
Emetọ ala na-egbochi mmepe nke ndụ nke faunaNa-enweghị nri ma ọ bụ mmiri dị ọcha, ụdị na-akwaga ma ọ bụ na-ata ahụhụ mmebi na usoro ọmụmụ ha. Usoro a mgbe ahụ ihe a na-akpọ "mbibi ọdịda ala" yabụ "ọnwụ na uru ala”, Ọrụ ugbo na-akwụsị, anụmanụ ndị ahụ akwụsị ma ala ahụ abaghị uru.
Ọnwụ nke ọdịdị nke ala na-agụnye ọtụtụ nsonaazụ na-adịghị mma sitere na ya mbibi, dị ka anyị kwuworo, ọbụnadị enweghị ike iji ya rụọ, zụlite ma ọ bụ, n'ụzọ dị mfe ma dị mfe, iji debe usoro okike dị mma.
Enwere ike ịta ahụhụ ya na nzuzo, na-akpata a ndị na-eme ihe ike mgbe niile, ma obu mmadu ma obu anumanu na osisi.
Ihe atụ doro anya bụ ụlọ ọrụ nuklia Chernobyl, ma ọ bụ nke kachasị nso redioaktivu si na ụlọ ọrụ ike Japan de Fukushima, n'ihi na mmetọ ala emetụtawo ọrụ ugbo, anụ ụlọ na ịkụ azụ. Achọtala ya irighiri redioaktivu dị n'ụsọ oké osimiri site na Fukushima, kpọmkwem na mmiri nke ụwa site na otu ihe ahụ, dị ka ọmụmụ dị iche iche nke Institute of Industrial Sciences nke Mahadum Tokyo, Mahadum Kanazawa na National Research Institute.
N'aka nke ọzọ, yana ndagwurugwu ezi uche dị na ya nke ọdịda ala n'ihi ịda ogbenye nke usoro okike, na-abụkarị mfu a na-enweghị ike ịgbanwe agbanwe, mmetọ ala na-egosi Millionaires tụfuru site na igbochi mmebi nke mpaghara a sitere na ụmụ amaala ma ọ bụ ndị na-etinye ego na ụlọ ọrụ.
Chernobyl afọ 30 mgbe e mesịrị
N'ime afọ 30 kemgbe ihe ọghọm nuklia Chernobyl, ọchịchị Kọmunist dara, Soviet Union gbasasịrị, ọbụnadị nnupụisi abụọ na agha ka na-aga agha na Ukraine.
N'ihe banyere oge akụkọ ihe mere eme, ọ dị ka ụwa agbanweela karịa ka ọ dị mkpa kemgbe ụtụtụ ahụ jọgburu onwe ya, nke otu ndị ọrụ ntanetị gbakwara ihe ngosipụta nke anọ nke ụlọ ọrụ ike Vladimir Lenin, n'agbanyeghị na ha na-eme ule nke kwesiri ime ka nchekwa ha sie ike.
Ma maka gburugburu ebe obibi - ikuku, mmiri, ala gbakwunyere ihe niile dịrị ndụ na ga - ebi na ya - ọ dị ka a ga - asị na aka elekere anaghị emegharị. Na Mmetụta ikuku redioactive na-ewe ọtụtụ puku afọ iji belata. Afọ iri atọ abaghị uru ọ bụla n'ihe gbasara ọdachị nuklia kachasị njọ n'ụwa.
Chernobyl ka dị na mkpụrụ osisi ọhịa na ero, na mmiri ara ehi na ngwaahịa mmiri ara ehi, na anụ na azụ, na ọka wit. Na na nkụ a na-eji eme ka ọkụ na ntụ nke fọdụrụ mgbe nke a gasịrị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, na ahụ ike nke mmadụ niile. Ihe dị mkpa - ọbụlagodi taa - ga-aga ahịa na a Ogwe Geiger, obere igwe ndị ahụ na-eme mkpọtụ na-adịghị mma mgbe ha rutere redioactivity, iji mara ma ngwaahịa ndị ị ga-ewere na tebụl gị nwere ogo nchekwa dị mkpa. a ga-eri ya.
Ngwọta maka mmetọ ala
Mgbochi bụ azịza kacha mma, kuziere ndi ntà inye onyinye. Site na ịtụfu ahịhịa dị n’ebe ị nọ tinye aka na draịva mkpocha obodo.
Ma, ọ bụkwa eziokwu na ị nwere ike ghara mgbe niile (na-achọghị) izere mmetọ ala. Mgbe ụfọdụ ihe mberede na-eme, na-eme ka o sie ike ịchịkwa, mgbe ọ gaghị ekwe omume.
Ọ bụrụ na anyị agaa kpọmkwem na-akpata nsogbu ahụ, a mgbanwe siri ike na ụdị mmepụta ma ọ bụ machibido ụfọdụ omume dị ka ọrụ nke ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị na-emepụta nsí na-egbu egbu, mwepụ nsị, iji fatịlaịza wuru na mmanụ.
O di nwute, nhọrọ ndi a abughi ihe efu. Ya mere, n'ihu ihe ịga nke ọma, a na-achọ ihe ngwọta sitere na ihicha ebe ahụ ruo na njedebe dị mfe nke mpaghara mebiri emebi na machibidoro iji ya eme ihe ụfọdụ. N'okwu ndị siri ike, dịka Fukushima ma ọ bụ Chernobyl, mpaghara ndị emetụtara adịghị mma maka ndụ mmadụ.
Ma, ebe ọ bụ na mmetọ mmụba amụbaala n'ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi nrụpụta ọrụ na mmepe obodo, ihe ngwọta na-abịa kpọmkwem site na nchịkwa nke isi mmalite ndị a. Habit, omume na-elekwasị anya na melite imegharị ihe maka iji osisi iji belata mmetọ nke ala na, n'otu oge ahụ, nke mmiri, ebe ọ bụ na ọ na-emerụ ya.
Nchịkọta ala bụ usoro nke na-achọ iweghachi ihe ndị e metọrọ emetọ site na iji ihe ndị dị ndụ, dị ka nje bacteria, osisi, fungi ... Dabere n'ụdị mmetọ ị chọrọ ịlụ ọgụ, a ga-eji otu ma ọ bụ ndị ọrụ ọzọ mee ihe. bioremediator. Ngwa ya sara mbara, na-enwe nsonaazụ na-atọ ụtọ na ala ndị ọrụ redioactivity merụrụ ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, site na ọrụ ndị na-egwupụta akụ.
Dị ka ezi omume, zuru ezu imegharị ihe maka mkpofu na ahihia ọgwụgwọ, na mmejuputa ume ohuru, ịgwọ ahihia nke ụlọ ọrụ na nke ụlọ ma ọ bụ nkwalite nke ịkọ anụ ụlọ ga-enyere aka gbochie ala ahụ enweghị mmetọ. Nọgide na-enwe netwọk nsị n'ọnọdụ dị mma ma melite ọgwụgwọ mmiri mmiri, yana ọgwụgwọ nke nsị ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-eweghachi na okike.
Ihe ngwọta ndị ọzọ nwere ike ịtụle ga-abụ:
Nwee ezigbo netwọọdụ ọhaneze
Ndị mmadụ na-eji ụgbọ ala abụghị naanị maka ntụsara ahụ, kamakwa n'ihi etu esi esi esi ụgbọ njem ọha na-agagharị n'ọtụtụ obodo. Ọ bụrụ na gọọmentị etinye ego na njem ọha na eze na-arụ ọrụ nke ọma, ndị mmadụ agaghị ala azụ iji ya
Iji ụgbọ ala eletrik eme ihe
Carsgbọ ala eletrik adịlarị na-adịkarị n'obodo, na, n'ihi na ha na-enye ike naanị site na ọkụ eletrik, ha anaghị ewepụta ụdị nsị ọ bụla na gburugburu ebe obibi. Mgbe nnwere onwe na-abụbu nsogbuTaa, batrị ụgbọ ala eletrik na-adịru ogologo oge, ọ ga-ekwe omume ịchọta ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ n'akụkụ dị iche iche nke obodo.
Zere ime ka ụgbọ ala gị na-agba ọsọ ogologo oge mgbe ị na-akwụsị
Otu ihe ị ga-eme ugbu a. Zere iguzo ka ụgbọ ala gị na-agba ọsọ, ebe ọ bụ na n’oge ahụ, ụgbọala ahụ na-eji mmanụ dị ukwuu, ihe ọkụkụ dị na ya
Mee ka ugbo ala gi di nma
Cargbọ na-adịghị arụ ọrụ na-eche na-emerụ ihe. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ kwekọrọ na ụgbọ gị, ị ga-achọpụta na ọ bụghị naanị izere nsogbu ọrụ, kamakwa iji belata ikuku nke gas.
Nyere aka igbochi igbukpọ osisi
Iji zere mmetọ ala, a ga-emerịrị usoro oke oke na oke ọsọ. Osisi osisi. A na-ebute mbuze ala mgbe enweghị osisi iji gbochie oyi akwa nke ala site n'aka ndị ọrụ okike dị iche iche, dị ka mmiri na ikuku.
Choputa ihe ndi ozo.
Obi abụọ adịghị ya na ngwaahịa ndị dị ndụ dị oke ọnụ ma e jiri ya tụnyere kemịkal. Ma oke nke organic ngwaahịa ga-agba ume a ọzọ organic mmepụta. Nke a ga - enyere gị aka igbochi mmetọ ala.
Jiri akpa akwa. Zere iri nri plastic dị ka ha na-ewe ogologo oge tupu ha emebi. Luckily ebe ọ bụ na ha ga-akwụ ụgwọ ihe oriri ha adabala nke ukwuu.
Anyị kwesịrị ịkọwa ahịhịa dị ka ihe mejupụtara ya:
Organic n'efu: ihe mkpofu nile nke ihe omumu, nke di ndu ma obu buru ihe di ndu, dika ima atu: akwukwo, nkpuru ahihia na ahihia site na imeputa ihe n'ulo, wdg.
Inorganic fọduru: nbibi ọ bụla nke enweghị ihe ọmụmụ, nke ụlọ ọrụ mmepụta ma ọ bụ nke usoro ndị ọzọ na-abụghị nke okike, dịka ọmụmaatụ: plastik, akwa sịntetik, wdg.
Ihe egwu dị egwu: ihe mkpofu ọ bụla, ma ọ bụ nke sitere na ya ma ọ bụ na ọ bụghị, nke bụ ihe egwu nwere ike ị ga-emeso ya n'ụzọ pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ: ihe gbasara ahụike na-efe efe, mkpofu redioakti, acid na kemikal na-emebi emebi, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ọmụmụ ihe ọmụmụ » Agriculturelọ ọrụ ubi » Ihe na-ebute na nsonaazụ nke mmetọ ala
Ọ na-atọ ụtọ, agụmakwụkwọ, ọ dị m ka ọrụ a, anyị ga-eme ka ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ mara, n'ihi na ọ bụ ebe ahụ ka anyị ga-ekwusi ike na usoro ihe kpatara na nsonaazụ! Daalụ, ọ na-eme ka ọ dịrị m mfe ịchọta onye ga-akwado m
na-aga n'ihu na-eme ka a mata.
Zaghachi Dalila Rolón del Puerto
otú ara ara 🙂
Zaghachi nye emily_pro
Anyị ga-ahụ nsonazụ ọkụ Fukushima nke nuklia n'ọdịnihu, ọ ga-abụkwa ezigbo njọ. Ihe niile maka ịgbasoghị usoro nchekwa. Ihe ọzọ dị mkpa bụ mmetọ nke mmiri mmiri na mmanụ. Ezigbo edemede, dị mkpa iji mee ka ndị mmadụ mata.
Daalụ ọzọ! : =)
More obere cony dijo
Nkọwa gị na-atọ ụtọ
Zaghachi More obere cony
Daalụ! Nnukwu ekele!
M nye ya 1000
Daalụ, ị nyeere m aka rụọ ọrụ ụlọ m.
Enweghị m mmasị
Zaghachi na sofi
ezigbo akụkọ a debe ya iji hụ ma anyị niile nwere ike ịmara mmebi anyị na-emebi
ihe kpatara akụkọ ahụ bụ:
ihe ndị na-egbu egbu n’okpuru ala
ịkwafu ma ọ bụ itufu na mberede
arụ ọrụ leaks
Zaghachi rosysela saldaña villacorta
Nnọọ. ezigbo nkọwa ...
na-akpata ụkwara nke ụmụ anụmanụ
Zaghachi na micha2012m
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na ha na-akụzi ya na nnukwu edemede a, imegharị ihe nwere ike ịchekwa ugwu anyị, obodo anyị, osimiri na oke osimiri anyị.
Anyị kwesịrị ịkụnye uru gburugburu ebe obibi anyị.
Zaghachi Green Wheel
Obodo na oriri ike n’uwa niile